Madaxda ECOWAS oo taageeray Adama Barrow - BBC News Somali
Madaxda ECOWAS oo taageeray Adama Barrow
Xigashada Sawirka, Reuters/AFP
Yaxya Jammeh, midig, waxaa doorashada kaga guuleystay, Adama Barrow, bidix
Urur goboleedka ECOWAS ee ay ku midoobeen wadammada Galbeedka Afrika ayaa sheegay in ay qaadi doonaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si ay u taageeraan natiijada doorashadii Gambia.
Wadammada ku bahoobay urur goboleedka Ecowas ee galbeedka qaarada Afrika, ayaa waxa ay si cad u doonayaan in ay farriin ugu diraan madaxweynaha dalka Gambia Yahya Jameh, taasi oo ah in uu xilka isaga dego, iyagoo sheegay in ay taageeri doonaan natiijadii ka soo baxday doorashadii dalka Gambia.
Madaxda wadammada Ecowas oo ku shiray dalka Nigeria ayaa ballan qaaday in bisha soo socota ay ka qeyb geli doonaan caleema saarka madaweynaha la doortay ee dalkaasi Gambia, Mr Adama Barrow, dabcan taasi waxay ku xirnaan doontaa hadba sida Mr Jammeh uu u ogolaado inuu xilka uga dego.
Dhanka kale madxda Ecowas waxaa ay sidoo kale sheegeen in ay damaanad qaadi doonaan ammanka madaxweynaha la doortay kaddib markii uu sheegay in uu u baqayo naftiisa.
Hogaamiyeyaasha ayaa sidoo kale madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari Iyo midka uu waqtigiisa sii dhamaanayo ee Ghana, John Dramani Mahama, ee doorashadii dhaweyd ee Ghana loogaga adkaaday, waxaa loo magacaabay in ay dhex-dhexaadiyaan xasaradaha ka aloosan dalka Gambia .
Madaxweynaha Gambia Yaxya Jammeh, ayaa diiday natiijada doorashadii madaxtinimada ee la qabtay bilowgii bishan, todobaad kaddib markii uu aqbalay in laga adkaaday.
Madaxweynaha la doortay Mr Barrow ayaa ku eedeeyay madaxweynaha talada haya inuu dimuqraadiyadda waxyeelaynayo loona baahanyahay inuu aqbalo natiijada doorashada.
Kooxda ku howlan la wareegidda xilka Mr Barrow ayaa sheegtay in madaxweynaha la doortay uu badqabo.
Putin oo siiyey billaddii ugu qaalisanayd ninkii curiyey gantallada guuxooda ka dheereeya
Da'da dumarka ay ku dhalmo daayaan mala kordhin karaa?
Magaalo Sacuudiga ku taalla oo la aaminsanaa 'inay habaar qabto'
Siduu Turkiga halis ugu yahay amniga Carabta?
Tira intee dhan oo dibadbaxayaal ah ayaa loo baahan yahay si madaxweyne xilka looga tuuro?